स्थानीय तहको शासन र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध - Purwanchal Daily
कांग्रेसको केन्द्रीय विभागमा:झापाका १५ जनाभन्दा बढी मनोनित
सङ्क्रमण रोक्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री राई
जसपाले प्रम ओलीप्रति प्रयोग गरेको भाषा निन्दनीय छ :प्रेस सल्लाहकार थापा
झण्डै तीनदर्जन नेता कार्यकर्ताले छाडे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त
बिर्ताबजारको अञ्जु किरानामा प्रहरीको छापा, अवैध सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद
कोरोना त्रासले झापामा श्रीकृष्ण रथयात्रा स्थगित
७२ वर्षका उमेरमा एकल महिलालाई नागरिकता
‘प्रहरीको सक्रियताले अपराधजन्य घटनामा कमी’
जनप्रतिनिधिले ०.५% पनि वाचा पूरा गरेनन् – अध्यक्ष गुरुङ (भिडियो सहित)
संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक विरुद्ध देश भरका निजामती कर्मचारी…
“दुई रुपैयाँ लगानी गरेर चार रुपैयाँ कमाइहाल्ने मेरो लक्ष्य होइन ”
‘एकका लागि एक अभियानसँग सहकार्य गर्दै विपद्मा सहयोग गर्दैर्छौं’
मनोज र विनयको “लकडाउनको तिज” सार्वजनिक ( भिडियो )
सालको पातको ‘भ्यूज’ हालसम्मकै सर्वाधिक
‘आएन खबर’ सार्वजनिक
सुशिलालाई मायाको अनुपम रंग तिमी हौ भन्दै आए कमल ( भिडियो…
सोनाक्षीले गरिन् तापसीको खुलेर तारिफ, भनिन् – ‘राष्ट्रपति बनेको देख्न चाहान्छु’
कर्भडहल निर्माण अधुरै
राष्ट्रिय टोलीको गोलकिपर प्रशिक्षकमा मल्ल
प्रचण्डका तीन विकल्प : ओलीको एक विकल्प
कसरी हुर्कँदैछन् नयाँ पुस्ता ?
पुँजी बजार सही दिशातर्फ उन्मुख
निरालोच्य प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न
अबको नेपाली श्रम बजार कस्तो रहला ?
कृष्णाष्टमी र अपेक्षा
अनियन्त्रित हुनबाट रोकौं
प्युरेबासीको पीडा हरण गर
ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र आवश्यकता
उत्तर आधुनिक कन्यादान संकल्प
दुबईले जुराएको प्रेम
स्थानीय तहको शासन र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध
२३ असार २०७७, मंगलवार १०:५५ मा प्रकाशित
संघीय गणतन्त्र नेपालको गठन र कार्यान्वयन सँगसँगै देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको यथार्थ जग जायर नै छ । देशमा तीन तहको सरकार छ र यसको परिकल्पना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको प्रयोग ३ स अर्थात समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा गरिने भनेर उल्लेख छ । यी तीन तहमध्ये वर्तमान परिप्रेक्षमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा देखिएको पैठाजोरीको सम्बन्ध र त्यसले ल्याएका विविध समस्याबाट अधिकांश स्थानीय तहमा हलचल ल्याएको छ ।
शासन सञ्चालनार्थ राजनीतिज्ञहरुको आवश्यकता पर्छ भने प्रशासन सञ्चालनार्थ योग्य र कुशल प्रशासकको जरुरत हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु लोकतान्त्रिक विधिबाट नागरिकद्धारा निर्वाचित भएर शासन सञ्चालन गर्दछन् भने प्रशासन संयन्त्र योग्यता प्रणाली मार्फत नियुक्त भएर आएका हुन्छन् । राजनीतिज्ञले राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र संस्कार बमोजिम कार्य गर्दछन् भने प्रशासकले पूर्व निर्धारित मूल्यमान्यता र संस्कृतिका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दछन् । जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका हिसाबले यी दुई पक्ष अलग देखिए तापनि दुबै बीचको सहिष्णु सम्बन्ध र रचनात्मक अन्तरक्रियाबाट मात्र सुशासन र असल शासनको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने बजेट तर्जुमाका समस्या हरेक वर्ष झैँ यसपाली पनि स्थानीय तहमा व्यापक देखापरे । जसले गर्दा फेरि पनि विभिन्न पालिकाहरुमा मतभेद, द्वन्द्व र कलहले स्थान पाएको यत्रतत्र सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । मुलतः यस्ता समस्या आउनुमा जनप्रतिनिधिहरुको हठ र अदुरदर्शिता साथै विपक्षी वर्गको अस्वस्थ र अपरिपक्व विरोधले काम गरेको छ । तथापि यस्ता समस्यामा स्थानीय शासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशासन समेत जोडिएर आउने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । शीर्षकका दुई पक्षबीचको अन्तरसम्बन्धका मामलामा विभिन्न आधारले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. सैद्धान्तिक आधार :
शासन सञ्चालक र प्रशासनकाबीचको अन्तरसम्बन्धका सवालमा प्रकाश पार्न धेरै मान्यताहरुको विकास भएका छन् । विल्सनको अर्थोडक्स डिक्टाटोमी मान्यतामा राजनीति र प्रशासन दुई अलग विषय हुन् र यिनीहरुलाई अलग रुपमा हेर्न दुबैबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्दछ । सक्षम र योग्य प्रशासक राजनीतिक रुपमा तटस्थ तर राजनीतिज्ञको अधिनस्थ हुनुपर्दछ । र, उनीहरुको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा भिन्न हुनुपर्दछ भनेका छन् । प्रसिद्ध समाजशास्त्री तथा राजनीतिशास्त्री म्याक्स वेबरका विचारमा राजनीतिज्ञले नीति बनाउने र प्रशासन संयन्त्रले सफल रुपमा उक्त नीतिको कार्यान्वयन गनुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ मोन्टाजाँइ र वाटसन अनुसार, डिक्टोमी राजनीति र प्रशासनबीचमा विल्सन र वेबरको मान्यता लागू हुन सक्छ । तर, नीति र प्रशासनमा होइन भन्छन् । उनीहरु प्रशासन संयन्त्र नीति कार्यान्वयन बाहेक नीति–निर्माणको सवालमा पनि सक्रिय रुपमा संलग्न हुनुपर्दछ भन्दछन् । यो मान्यता परिमार्जित डिक्टोटोमी मोडेलको हो । यस मोडेलमा प्रशासनले सक्रिय रुपमा नीति–निर्माणमा भाग लिन पाउने तर राजनीतिज्ञले नीति कार्यान्वयनबाट अलग रहनुपर्ने धारणा राख्दछ । त्यस्तै अर्को मान्यता साझेदारीको मान्यता रहेको छ । जसअनुसार राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध अर्थोडक्स डिक्टोटेमी र परिमार्जित डिक्टोटोमी मोडेलभन्दा भिन्न छ । नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा दुबै पक्षको पुरक भूमिका हुनुुपर्दछ भन्ने धारणा साझेदारी मान्यताको रहेको छ ।
राजनीतिज्ञ र प्रशासक एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् र राजनीति र प्रशासनलाई कडाईका साथ छुट्याउनु अनुत्पादक हुन्छ । वास्तव मै नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यी दुईपक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अलगकर्ताहरु भएता पनि यिनीहरुको अन्तरसम्बन्ध परिपूरक रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष होस् शासन प्रक्रियामा यिनीहरुको अन्तरक्रिया र पारस्परिक परिपूरकता सुमधुर रहेमा मात्र सुशासन कायम हुने देखिन्छ ।
२. नेपालको सन्दर्भमा :
वि.सं. २०५४ सालको निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिकोे कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तहको सरकार गठन हुन करिब १५ बर्ष लाग्यो । जसले गर्दा १५ वर्षसम्म नेपालमा स्थानीय शासनमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय शासन र विकासका सबै गतिविधिहरु प्रशासक कै काँधमा आयो । तसर्थ, यस समयावधिमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकका बीच परस्पर सम्बन्ध, निर्भरता र द्वन्द्वका मामलाहरु देखिएनन् । जब वि.सं. २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो अनि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरुको आगमन भयो । तत्पश्चात नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ र ९ मा व्यवस्था भएका क्षेत्रहरुमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न फेरि राजनीतिज्ञ र प्रशासन एकआपसमा निर्भर र समन्वय गर्न थाले र बिस्तारै स्थानीय तहमा मुद्दा मामलाहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
स्थानीय तह र प्रशासनबीच रहेको नङ मासुको सम्बन्धलाई स्थिर र सन्तुलित बनाई राख्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट कतिपय स्थानीय तह चुकेको हुनाले आजको माहौलको सिर्जना भएको हो । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व बिनाको स्थानीय तहले प्रभावकारी र जनचाहना बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन भन्ने हेक्का नराखिनुले नेपालको सन्दर्भमा जनमुखी शासन व्यवस्था संकट परेको हो । राजनीतिज्ञले प्रशासन संयन्त्र प्रति सम्मान र जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक शक्तिको बर्खिलाप जानुले जनताले शास्ती पाएकै छन् । तसर्थ, यिनीहरुबीचको विश्वास र एकअर्काप्रतिको धारणाले नै स्थानीय शासनको बागडोर सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ, अन्यथा जनताको विश्वास यस व्यवस्था माथिबाट उठ्ने र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
हाम्रा स्थानीय तहहरु अझै जनमूखी र जिम्मेवार नबन्नुमा राजनीतिज्ञ र प्रशासनले एकअर्का प्रति राखेको धारणा नै प्रमुख कारण हो । प्रशासक भनेको बिशेषज्ञ हो, किनकि उनीहरु प्रशासनिक योग्यता प्रणालीबाट नियुक्त भएका हुन्छन् । धेरैजसो प्रशासक सार्वजनिक चासो र जनताको भावना बारे कम चिन्तित हुने र वृत्ति विकासमा बढी केन्द्रित भएको राजनीतज्ञहरुको ठम्याई छ । यसको विपरीत प्रशासकहरु राजनीतिज्ञले कानूनी प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलता नबुझ्दा विकासका कार्यक्रमहरु रातारात गर्न खोजेको धारणा राख्दछन् । राजनीतिज्ञहरुले प्रशासनका सीमा र जटिलतालाई ध्यान नदिई कार्यसम्पादन गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । तसर्थ, यस्ता धारणा र आरोप प्रत्यारोप स्थिर र समन्वयकारी नभइञ्जेल संघीयताको मोडेल अन्तरगतको स्थानीय शासन व्यवस्था गतिशील र प्रभावकारी हुने प्रायः असम्भव रहेको छ ।
३. निष्कर्ष :
अवश्य पनि स्थानीय तहको सफलता र असफलता राजनीतिज्ञ र प्रशासकको सुमधुर सम्बन्ध र सन्तुलित भूमिकामा निर्भर हुन्छ । यस्तो किसिमको व्यवस्थामा अवसर र चुनौति दुबै रहन्छ । तसर्थ, देशको आमूल विकास र समृद्धिका लागि यी दबै पक्षको सम्बन्ध र भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । फरक राजनीतिक आस्था भएका राजनीतज्ञ र प्रशासकबीच आपसी द्वन्द्व र बेमेल हुनु स्वभाविक हो ।
तर, त्यसलाई आपसी समझदारी, जनउत्तरदायित्व र कानूनी तथा प्रशासनिक मूल्यमान्यताको आधारमा सुल्झाएर अघि बढ्नु नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । राजनीतज्ञलाई प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ भने प्रशासनलाई राजनीतिक समर्थन र रणनीतिक चित्र चाहिन्छ । दुबैपक्षले आ–आफ्नो सीमा, मूल्य–मान्यता, विश्वास र संस्कृतिलाई आत्मसाथ गर्दै असल शासनको प्रत्याभूति दिलाउन आ–आफ्नो मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
Previous articleपौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु
Next articleहोटल व्यवसायको संरक्षण गर
नेकपाको अन्तरविरोधः प्रचण्डको ‘कोर्स करेक्सन’ कि ‘कन्फ्युजन’ ?
मेचीनगरमा चिकित्सकसहित थप चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि